Madaxwaynihii Mali oo si qoor qabad ah loogu khasbay inuu is casilo (Maxaa ka dhacay guriga wiil uu isagu dhalay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Madaxwaynihii Mali oo si qoor qabad ah loogu khasbay inuu is casilo...
Madaxwaynihii Mali oo si qoor qabad ah loogu khasbay inuu is casilo (Maxaa ka dhacay guriga wiil uu isagu dhalay?)
(Bamako) 19 Agoosto 2020 – MW Mali, Ibrahim Boubacar Keita, ayaa ku dhawaaqay inuu dhaqse isu casilayo, sida uu ku sheegay war rasmi ah oo lagu faafiyey warbaahinta qaranka ee ORTM.
MW Keita oo aan dookh kale oo buuran haysan ayaa sheegay inuu sidaa u yeelay si uu u baajiyo dhiig daata, waxaana sidoo kale lakala diray xukuumaddii iyo baarlamankii dalkaasi.
Ciidamada Xoogga Dalkaasi oo afgembi sameeyey ayaa xirey Madaxwaynaha iyo RW Boubou Cisse horraantii Talaadadii shalaytoole, sida uu sheegay Guddoonka Midowga Afrika.
Moussa Faki Mahamat oo xiritaankaasi dhaleeceeyey isla shalay ayaa ku baaqay in la sii daayo MW Ibrahim Boubacar Keita, RW Cisse iyo xubnaha kale ee dowladda, mar uu Twitter-ka war kusoo qoray.
Wuxuu ku baaqay in ciidamada ku “ballan furay Dastuurka dalkaasi ay ka baaqsadaan inay gacan ka hadal wax ku xalliyaan,” isagoo beesha caalamkana ugu baaqay inay arrintan si cad u diidaan.
Golaha Amaanka ee QM ayaa maanta kulan deg deg ah oo aan caadi ahayn ka yeelanaya arrintan kasoo korortay dalka Mali, sida ay codsadeen dalalka Faransiiska oo la tuhmayo inuu arrintan wax ka ogyahay aadna khabiir ugu ah inuu afgembiyo uu isagu gadaal ka taagan yahay ka sameeyo dalalkii uu gumaysan jirey iyo Niger.
Dad badan ayaa iskugu soo baxay fagaaraha xorriyadda Bamako, iyagoo xitaa isku dayey inay gudaha u galaan Madaxtooyada Qaranka, waxayna qaarkood markii dambe boobeen guri uu leeyahay wiilka Madaxwyanaha oo la yiraahdo Karim Keita.
Previous articleDhismaha Jidka Muqdisho-Afgooye oo dar dar ku socota & halka haatan wax la marsiinayo + Sawirro
Next articleAkhri 3 arrimood oo sababay in xilligan lagu kala maqnaado Shirka Dhuusamareeb 3